Uphume nyova umbhishobhi emlindelweni | isiZulu
Uphume nyova umbhishobhi emlindelweni
Kuboshwe abasolwa ababili ngelokubulawa kwababili emlindelweni
Kuxoshwe isikhulu ngeyomlindelo kaMandela
Kuhambe kahle emlindelweni kaMalema - Amaphoyisa
Durban - Kusuke isidididi basala bebambe onganzansi abantu kuxoshwa uMbishombi webandla iNkosinathi in Zion, emlindelweni obuse Nzinga eMpendle maphakathi neKwaZulu-Natal ngeledlule.
UMnu Tallman Zuma ongumbishobhi waleli bandla, aphinde abe nguSihlalo kuzwelonke weNkanyamba okuyinhlangano elwa nokwebiwa kwemfuyo, uthi usakude ukuyikhohlwa into eyenziwe ngabafowabo uZethembe Zuma emxosha emlindelweni womfowabo uMfihleni Zuma ngoba engene ehamba nebandla lakhe okuyiZayoni ekubeni umndeni wakubo usonta kwabasindisiwe kanye nasemaRomeni.
Uthi indaba isuswe ngukuthi umndeni wakhe uyazi ukuthi akahambisani nenkolo yabasindisiwe. Uthi ukuxoshwa kwakhe emlindelweni kuhlobene nalokho.
UZuma uthi yize kunjalo, kodwa bebevele bengaboni ngasolinye nomndeni wakhe ikakhulukazi abafowabo kubangwa izinxushunxushu zomndeni.
OLUNYE UDABA: Wenqabe ukuyocasha ezihlotsheni owekhanda
Uqhube wathi akacabangi ukuthi yilokho obekungenza bamuxoshe ngaphandle kokungahambisani kwakhe nenkolo yabasindisiwe ngoba ijwayele ukubiza amadlozi ngamadimoni.
UZuma uthi akahambisani nenkolo yabantu abasindisiwe. "Sekunesikhathi eside singangenelani nabafowethu ngenxa yokuthi sike saxabana phambilini sibanga ukuthinteka kwabo ekwebiweni kwemfuyo.
"Kodwa lokhu okwenzekile ngisemlindelweni kakwehlanga kahle ngoba bengiyobakhalisa emlindelweni njengombishobhi futhi ngihamba nebandla lami yize bengazi ukuthi akhona namanye amabandla. Umfowethu obefihlwa ubekhonza emaRomeni, umndeni wakhe wonke usonta kwabasindisiwe.
"Ngelanga lo mlindelo, ngithe nje ngingena nabazalwane abakhonza ngaphansi kwebandla lami, amaRoma kanye nabalandela inkolo yabasindisiwe bavele basukuma bonke baphuma etendeni.
"Kungixakile lokhu ngoba bengize emlindelweni futhi ngikuqonda ukuthi akhona amanye amabandla abekhona. Ngiqhubekile ngangena sahlala phansi namalunga ebandla.
"Into eyenza ngisole ukuthi ngixoshwe ngoba ngiyisayoni, yingoba ngike ngafika emzini kamfowethu ngesikhathi kulungiselelwa umngcwabo nagesikhathi kufika isidumbu ngoLwesihlanu emini kodwa bangangixosha. Kungixakile uma sengixoshwa ngoba sekukhona abasindisiwe kanye namaRoma.
"Okunye okwenze ngidideke ukuthi phambilini umdeni ungihlawulise umbuze emuva kokuba ngingayanga kufihlwa unkosikazi kamfowethu (uMfihleni) ebesingangenelani naye sabuyisana. Kuyathusa uma sengixoshwa phambi kwabantu bebuka," kusho uMbhishobhi uZuma.
Eqhuba uMbhishobhi Zuma uthi into emenza angahambisani nabantu abasindisiwe ukuthi uma beshumayela babiza amadlozi ngamadimoni nokuyinto angahambisani nayo.
Umthombo weLANGA obukhona ngelanga okuxoshwe ngalo uMbhishobhi uthi into eyenze abantu abaningi baphume ngesikhathi efika uyaziwa ukuthi akabafuna abantu abasindisiwe. Uthi sekukaningi ezwakala ezindaweni ezahlukene uma kuhlangenwe egxeka le nkolo yokusindiswa.
"Abantu abaningi emndenini wakwaZuma balandela inkolo yabasindisiwe. Ngikhuluma nawe nje ngisho udadewabo azalwa naye ekhaya abazwani naye ngoba usonta kwabasindisiwe. Ngiyacabanga ukuthi nalokho kube nomthelela wokuthi baphume ngesikhathi kufika yena. Abanankinga nebandla lakhe," kusho lo mthombo odonse intatheli ngendlebe ukuthi ingawudaluli.
UZethembe Zuma uvumile ukuthi umxoshile uMbishobhi Zuma ngenxa yokuthi kunokungaboni ngasolinye emndenini.
"Kuyiqiniso ukuthi ngimxoshile uMbhishibhi kodwa lokho ngikwenze njengelunga lomndeni kungahlangene nenkolo. Amabandla abesemlindelweni aphume ngoba vele nawo awazwani naye ngenxa yezinto abazibangayo eziphathelene nenkolo.
"Into eyenza singazwani naye uMbhishobhi Zuma ukuthi ungumuntu ongumxabanisi, ngikhuluma nawe nje kunoqhekeko emndenini ngenxa yakhe. Useke wanginuka nomfowethu lona ebesimufihla ngokweba izinkomo phambili kodwa wehluleka ukuveza ubufakazi balokho.
"Okunye ongakwazi ngaye ukuthi ngisho izingane zakhe azikhuli ngaphansi kwesandla sakhe ngoba ziyambalekela ngenxa yendlela aziphatha ngayo. Ngisho amalunga omphakathi ayasithinta ayabonga ngokumxosha kwethu ngelanga lomlindelo ngoba kwawona awumufuni umphakathi ngoba uyahlukumezana," kusho uMnu Zuma.
Ukuphikile ukuthi uMbhishobhi uhlawuliswe imbuzi ngoba engafikanga emngcwabeni wenkosikazi kamfowabo.